Mjournal : — Guddoomiyaha degmada Marka ee maamulka dowladda Soomaaliya Max’ed Cismaan Yariisoow ayaa sheegay in gaari ay lahaayeeen sida uu hadalka u dhigay ciidamada AMISOM [Booyad] lagu qaraxiyay degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose. “Gaariga waxaa uu ahaa...
Mjournal :–Inta la og-yahay ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kaddib dagaal beeleed shalay gellinkii dambe ka dhacay bariga degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe. Dagaalada ayaa daba socday dagaallo horay beelahan...
Mjournal : — War-bixin ay soo saareen dhawaan hay’adaha UNHCR iyo WFP ee QM ayaa lagu sheegayin 25% hoos loo dhigayo gargaarkii raashinka ahaa oo eey siin jireen qaxootiga ku jira xerooyinka Dhadhaab, taasina waxa si weyn uga qeyliyay qaxootiga oo sheegay in markii horeba...
Mjournal :–War ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyihii bankiga dhexe Soomaaliya Yusuf Abrar iska casishay xilkaas, oo uu dhawaan u magacaabay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud. Masuul ka tirsan dowladda faderaalka...
Mjournal :- – Wasaarrada gaashaandhiga ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay sidii ay dib ugu dhisi lahayd ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirrka gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya C/xakiin Xaaji Max’uud. Wasiirka ayaa tilmaamay in...
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo maalintii shalay khubad ka jeediyay Jaamacada magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in qaadashada nidaamka federaalka uu xal u yahay sida uu hadalka u dhigay mashkalada dalka ka jira. “Aada ayaan...
Mjournal : — Waxaa lagu wadaa in maanta galinka danbe uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya shirweynaha dib-u-hishiisiinta gobollada Jubbooyinka, oo dhowr jeer oo hore dib u dhac ku yimid kadib markii uu mad-madow shirka ku aadan soo kala dhax-gallay...